Nzira dzese mumutambo wenhabvu dzichange dzakananga kuRufaro Stadium neSvondo.
Munhandare iyi muchange muine mutambo mukuru weHarare Derby pakati peCaps United neDynamos uyo wauya panguva iyo Makepekepe neDembare dzese dziri kutatarika muCastle Lager Premier Soccer League.
Dynamos, iyo iri pamusha, haina kupamhidzira mari yepagedhe kubva pamadhora gumi zvekuti nhandare iyi iri kutarisirwa kuzara kuti tashu apo vateveri vezvikwata zviviri izvi vari kuuya kuzokuzirira zvikwata zvavo kuti paite musiyano panopera mutambo.
Mitambo pazvikwata izvi kunyanya wekutanga mumwaka unonetsa kududzira kuti achakunda ndiani zvekuti muteveri wemaGreen Machine, VaInnocent Mutena, vanoti tsvimbo ingangowira kwese kwese.
Mumwe muteveri wemaGreen Machine, VaMisheck Chisale, vanoti Chitembwe anoziva kuti basa rake richengetedze anofanira kurova Dynamos kunyange zvikaoma sei.
Pari zvino, Caps United iri pachinhanho chechitatu muhurongwa hweCastle Lager Premier Soccer League asi Dynamos iri pasi pasi pachinzvimbo chegumi mushure mekuita mangange svondo rapera ne Black Rhinos.
Dynamos ine mapoinzi gumi nemapfumbamwe, mapoinzi mapfumbamwe pasi pechikwata chiri kutungamira makundano aya cheFC Platinum.
Asi mumwe muteveri wechikwata ichi, VaTatenda Feremango, vanoti kutatarika kwavo kuri kuperera paMakepekepe.
FC Platinum yacho iri kutarisirwa kuwedzera hutungamiri hwayo iri pamusoro apo iri pamusha neChapungu muMandava Stadium, panguva iyo Chicken Inn, iyo iri pachinhanho chechipiri, iine mutambo usina kupfava nevavakidzani vayo, Bulawayo Chiefs.
Mitambo yese yeCastle Lager Premier Soccer League iriko yakamira seizvi…
Herentals v Hwange
ZPC Kariba v Triangle
Yadah v Harare City
Ngezi Platinum v Black Rhinos
Manica Diamonds v Highlanders
TelOne v Mushowani